रंगमञ्च जाग्दो छ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
रंगमञ्च जाग्दो छ
क्लासिक वा चर्चित कृति मञ्चमा हेर्न पाउनु दर्शकका लागि नयाँ स्वाद पक्कै हो । तर, अनुवाद र रुपान्तरणको मात्रै भर पर्दा मौलिक नाटक लेखनमै विराम त लाग्ने होइन ?
वैशाख ३१, २०७९ फणीन्द्र संगम
काठमाडौँ — लेखक नारायण वाग्लेलाई केही वर्षअघि उपन्यास ‘पल्पसा क्याफे’ माथि सिनेमा बनाउने प्रस्ताव आयो । उनले सोचविचार त गरे, तर स्वीकृति दिएनन् । किताबमाथि बनेका धेरैजसो नेपाली सिनेमा ‘फ्लप’ भइरहेकामा उनको अस्वीकृति पो थियो कि !
शिल्पी थिएटर भने यतिबेला मुक्त रंगमञ्च ‘अलिकति उज्यालो’ अभियानमा देश दौडाहामा व्यस्त छ । कोरोना महामारीले दुई वर्ष ठप्प बनेका अन्य थिएटर पनि जुर्मुराइरहेका छन् । आरोहण गुरुकुल गत पुसदेखि नियमिततामा फर्किएको छ । कुञ्ज थिएटरमा आफ्नो मुकाम बनाएर सुरुमा ‘पुतलीको घर’ मञ्चन गर्‍यो । भर्खरै ‘स्कुल’ नाटक प्रदर्शन सकाएको गुरुकुल ‘कोही किन बर्बाद होस्’ को तयारीमा जुटेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०८:३५
स्यालरले लेखेका छन्, ‘उच्च–हिमाली भेगका थुप्रै जीवजन्तु भेटेको छु । तर, हिउँचितुवाले झैं कुनै जीवले पनि मलाई प्रभाव पारेनन् । बिरलै देख्न पाइने यस दुर्लभ र रहस्यमयी जन्तुले मलाई लोभ्याइरहन्छ ।’
वैशाख ३१, २०७९ नरेश कुसी
काठमाडौँ — सन् २०१३– अक्टोबर, सोलुखुम्बुबिहानको पारिलो घाममा फोर्चे गाउँको फापरबारीतिर यत्रतत्र चरिरहेका डाँफे हेर्दै मग्न थिएँ । गाउँबाट अलि परको गोठतिर देखाउँदै एक जनाले भने, ‘यतातिर हिउँचितुवा बिरलै भेटिन्छ । धेरैपछि हिजो बिहान ऊ त्यो भीरसँगैको गोठ नजिकै गोठालाले एउटा माउ हिउँचितुवा र त्यसका डमरु देखेको भन्थे !’
ती मान्छेले ‘ऊ’ भनेर औंला तेर्स्याएको गोठवरपर दुई दिनअघि हामीले झारल गनेका थियौं । सोचें, ‘एक–दुई दिन यतै बसेर हिउँचितुवा खोज्नुपर्ला । देखियो भने गजबै हुन्छ ।’ तर, मुख्य अनुसन्धान कार्य एकातिर थाती राखी हिउँचितुवा खोज्ने आँट र स्रोत दुवै थिएन मसँग । त्यो ‘रोमाञ्चक’ सोच दबाएर मुख्य काम झारल गन्न गोक्योतिर लागें । गोक्यो ब्लकको अध्ययनपछि फोर्चे गाउँ आइपुगेको भोलिपल्ट सबेरै गाउँलेले देखाएको गोठतिर लाग्यौं । हिउँचितुवा देखिने कुरै भएन । पुराना पदछाप भने भेटिए ।
सन् २०१४– अप्रिल, लिमी, उपल्लो हुम्ला
भारतमा हिउँद काटेर आफ्नो गाउँ फर्कंदै गरेका लिमिवा (लिमिका बासिन्दा) सँगै सहपाठी जीवन राई र म हिल्साबाट लिमी जाँदै थियौं । बाटैभरि थिए– हिउँचितुवाका नयाँ–पुराना विष्टा र स्क्रेप (खोस्रेको चिह्न) । अनुवांशिक अध्ययनका लागि हिउँचितुवाका विष्टाका नमुना संकलन गर्दै हिँडेकाले हामी निकै पछि परेका थियौं । बिहान ११ बजेतिर हामीले हिउँचितुवाको आलो पदछाप भेट्यौं ।
‘यसपालि हिउँचितुवा देखिन्छजस्तो छ !’ मनमनै खुसी भएँ । १२ बजेतिर झोम्पाल्यामा पुग्दा लिमिवाहरू हामीलाई पर्खिरहेका थिए । ‘आधा घण्टाअघि त्यो डाँडामा एउटा चेन (हिउँचितुवाको स्थानीय नाम) देख्यौं हामीले,’ १०० मिटरजति माथिको डाँडातिर देखाउँदै पासाङले भने । तर, दुर्बिनले पटक–पटक चियाए पनि त्यो हिउँचितुवा फेरि देखिएन ।
चार दिनपछि हाल्जी गाउँमा पोब्सां चाड सुरु भयो । ११ औं शताब्दीमा बनेको रिन्चेनलिङ गुम्बाको प्रांगणमा गाउँभरिका मान्छे भेला भएका थिए । तीन दिनसम्म चलेको चाडअन्तर्गत एउटा प्रस्तुतिका लागि गाउँलेले विभिन्न वन्यजन्तुका आखेटोपहार निकाले । त्यो प्रस्तुतिमा हिउँचितुवाको छाला पनि देखियो ।
सन् २०१६–मे, शे गुम्बा, उपल्लो डोल्पा
हिउँचितुवा र हिमाली ब्वाँसोका संकेत खोज्दै साथीहरू जेराल्दिन वेरहान र छिरिङ ल्हामु लामा, स्थानीय पथप्रदर्शक टासी र म कोङमोचे गुम्बा पछाडिको खर्क पुग्यौं । एक गोठालो चौंरी चराउँदै थिए । उनले भने, ‘एक घण्टाअघि बाच्छाहरूलाई बीचमा पारेर वयस्क चौंरीहरू गोलो घेरा बनाएर उभिएको देखेपछि म त्यतातिर लागें । २०–३० मिटर पर एउटा साबु (हिउँचितुवा) झाडीमा लुकेर बसेको रहेछ । मलाई देखेर
आफ्नो बाटो लाग्यो ।’ दिउँसो दुई बजेतिर त्यहाँ पुगेका हामी हिउँचितुवा देखिने आसमा सुर्यास्त नहुन्जेल बसिरह्यौं, तर अहँ देखिएन । उपल्लो डोल्पाको दुई महिने अनुसन्धान सकेर छार्का भोट हुँदै हामी मुस्ताङ निस्कियौं । छुसाङ गाउँबाट घाइते अवस्थामा उद्दार गरेर ल्याइएको एउटा हिउँचितुवा जोमसोममा उपचारका क्रममा मरेको समाचार पत्रिकामा छापिएको रहेछ । मरेकै भए पनि हिउँचितुवा हेर्न उत्साहित थिएँ । तर, त्यो उत्साह एक छिन पनि टिकेन । हामी जोमसोम पुगेको अघिल्लो दिन मात्रै हिउँचितुवाको लास जलाइएको रहेछ ।
त्यसैबीच पिटर म्याथिसनको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘द स्नो लेपर्ड’ हात पर्‍यो । सन् १९७३ मा उपल्लो डोल्पाको शे गुम्बावरपर नाउरको आनीबानी अध्ययन गर्न आएका जीव वैज्ञानिक जर्ज स्यालरसँग पदयात्रामा आएका म्याथिसन बीचैमा फर्केकाले उनले हिउँचितुवा देखेनन् । महायान बौद्धमार्गी म्याथिसनले पुस्तकमा ब्यक्त गरेका मनोभाव असाधारण छन् । पुस्तकको सबभन्दा धेरै साभार गरिएको एउटा अंशमा उनले लेखेका छन् ।
‘के तिमीले हिउँचितुवा देखेका छौ ?’
‘छैन । के त्यो कुरा सुन्दर छैन ?’
अत्यन्त आत्मिक मनोवृत्ति प्रस्तुत गर्दै उनले लेखेका छन् :
‘म हतोत्साहित छु पनि र छैन पनि । हिउँचितुवा यहाँ छ र उसका तुसारो–जस्ता आँखाहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्नु नै पर्याप्त छ !’
मैले पनि म्याथिसनले जस्तै हिउँचितुवा नदेखीकनै सुन्दर अनुभूति गर्न सक्थें हुँला त ?
सन् २०१६ को अक्टोबरमा जर्ज स्यालरसँग काठमाडौंमा भेट्ने मौका जुर्‍यो । उनी ४३ वर्षपछि पुनः उपल्लो डोल्पाको पदयात्रा गरेर फर्किएका थिए । अगस्ट महिनामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्मिथसोनियन–मेसन स्कुल अफ कनजर्भेसनमा दुई हप्ते तालिममा सहभागी हुन गएको मौकामा स्यालरको ‘तिबेत वाइल्ड’ पुस्तक किनेर ल्याएको थिएँ । स्यालरको हस्ताक्षर लिने सोचले मैले सो पुस्तक सँगै लिएर गएको थिएँ । हिउँचितुवा नदेखेको बारे म्याथिसनले अघि सारेका मनोभावमाथि स्यालरको सोच कस्तो होला ? यसबारे सोध्दा स्यालरले भर्खरै हस्ताक्षर गरेर दिएको ‘टिबेट वाइल्ड’ पुस्तकको ‘द स्नो लेपर्ड’ शीर्षकको अन्तिम अध्याय पल्टाए र त्यसको पहिलो हरफ पढ्न भने । त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘पिटरको जस्तो मनोभाव हासिल गर्न म असमर्थ छु ।’
त्यस भेटमा हामीले हिउँचितुवाबारे विशेष चर्चा गर्‍यौं । एसियामा गरेका अध्ययनहरूमा आधारित भएर लेखिएका सबै पुस्तकमा स्यालरले हिउँचितुवा–मोह स्पष्ट भाषामा पोखेका छन् । ‘द स्टोन्स अफ साइलेन्स’ पुस्तकमा उनले लेखेका छन् ः
‘मैले फ्याउमुसा, ब्वाँसा, उच्च–हिमाली भेगका पन्छीहरूलगायत थुप्रै जीवजन्तु भेटेको छु । तर, हिउँचितुवाले जस्तो कुनै जीवले पनि मलाई प्रभावित गरेको छैन । बिरलै मात्र देख्न पाइने यस दुर्लभ र रहस्यमयी जन्तुले मलाई लोभ्याइरहन्छ ।’ हिउँचितुवा कहिल्यै नदेखेको भए पनि मभित्र हिउँचितुवा–मोह अनौठो प्रकारले जाग्दै थियो । स्यालरका पुस्तकहरूले त्यसलाई थप मलजल गर्ने काम गरे । सन् २०१७ को जुन महिनामा मैले दाहिने हातमा हिउँचितुवाको ट्याटु खोपें । कहिल्यै नदेखेको जन्तुप्रति यो हदसम्मको आकर्षण कसरी पलायो, सोचेरै बेलाबेला आफैं अचम्मित हुन्छु ।
सन् २०१८ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण अभ्यास पढिरहँदा सहपाठीसँग स्कटल्यान्डको हाइल्यान्ड वाइल्डलाइफ पार्क घुम्न गएको थिएँ । पहिलो पटक हिउँचितुवा मैले त्यहीँ देखें । तर, प्राकृतिक बासस्थानमै निर्वाध घुमिरहेको हिउँचितुवा हेर्ने चाहना पूरा हुन अर्को साढे तीन वर्ष लाग्यो । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा मनाङका नागरिक वैज्ञानिक टासी राप्ते घलेले दिनदिनै सामाजिक सञ्जालमा हिउँचितुवाका नयाँनयाँ तस्बिर पोस्ट्याइरहेका थिए । २३ फेब्रुअरीको दिन जीवनसाथी सविता गुरुङ र मुस्ताङका भाइ बाबु गुरुङका साथ मनाङ पुगेर टासीकै ‘होटल माउन्टेन लेक’ मा बस्यौं । पाँच दिनदेखि नियमित हिउँचितुवा देखिरहेका उनले त्यस दिन ११ घण्टासम्म अवलोकन गरेछन् ।
भोलिपल्ट बिहानै चाम्पा खाएर टासीको पछिपछि हिँड्यौं । गाउँको बीचबाट सजिलो र छोटो बाटो भए पनि उनी सधैं मुख्य बाटो छोडेर लामै बाटो हिँड्ने गर्दा रैछन् । यसरी हिँड्दा स्याल, रातो फ्याउरो, नाउरलगायत वन्यजन्तु देखिने सम्भावना हुने रहेछ ।
एक घण्टापछि उनले सधैं हिउँचितुवा देखेको ठाउँमा पुग्यौं । अलि परैबाट हिउँचितुवा कराएको सुनिएको थियो । हिउँचितुवाको आवाज सुनेर तीनवटा कुकुर भुक्दै त्यतै दौडेका थिए । एकाएक हिउँचितुवाको आवाज आउन छोड्यो । मध्याह्न १२ बजेसम्म कुर्दा पनि केही संकेत नपाएपछि होटल फर्कियौं ।
दिउँसो चार बजेतिर सोही ठाउँ पुग्यौं । बाटोमा भेटिएका बाख्रा गोठालोले आधा घण्टाअघि ४–५ पटक हिउँचितुवा कराएको बताए । नभन्दै हामी पुगेको केहीबेरमै आवाज आउन थाल्यो । सबैका आँखा आवाज आइरहेको दिशातिर मोडिए । पाँच मिनेटपछि टासीले हामी उभिएको ठाउँबाट ७००–८०० मिटर उत्तर–पूर्वको चोटीमा उभिएर पोथीलाई बोलाउँदै गरेको एउटा भाले हिउँचितुवा देखे र हामीलाई पनि देखाए । जीवनमा पहिलोपटक प्राकृतिक बासस्थानमा हिउँचितुवा देखेको त्यो क्षण मेरो मनमा आएको अनुभूति यहाँ व्यक्त गर्न गाह्रो छ । निकै भाबुक भएको थिएँ म । ५–१० मिनेटपछि त्यो हिउँचितुवा चोटीको पछाडि गयो । आवाज पछ्याउँदै निकै टाढासम्म गयौं, तर त्यस दिन हिउँचितुवा फेरि देखिएन । अर्को दिन टासीले हामीलाई याकखर्कसम्म पुर्‍याए । अघिल्लो दिन हामीले हिउँचितुवा देखेको ठाउँमा एक जना स्थानीय गाउँलेले दुईवटा अरू हिउँचितुवा देखेछन् । एकदम नजिक गएर तस्बिरहरू खिच्न खोज्दा ती भागेछन् । हामीसँगै याकखर्क आइपुगेका होटलवालाबाट यो सुनेपछि टासी जंगिए, ‘वन्यजन्तुलाई माया गर्छु भन्नेहरूले उनीहरूलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तो हैरानी भोगेपछि उनीहरू फर्केर नआउन सक्छन् ।’ साँझ आवाज पछ्याउँदै निकै नजिक पुगे पनि निस्पट्ट अँध्यारो भइसकेको थियो । त्यस दिन हिउँचितुवा देखिएन ।
तेस्रो दिन साँझ १६ः४० तिर आवाज आएपछि हामी माथितिर उक्लियौं । एक छिनपछि टासीको मोबाइलको घन्टी बज्यो ।
‘दाइ, बाघ यता छ’, अर्को टोलीले ४००–५०० मिटर तल हिउँचितुवा देखेछन् ।
उनीहरू भए ठाउँ पुगेर दुर्बिनले हिउँचितुवा खोज्न थाल्यौं । पाँच मिनेटपछि मेरा आँखाहरू लहरे धुपीको झाडी पछाडि बसेको हिउँचितुवाका आँखासँग जुधे । पूरै शरीरमा ऊर्जा सञ्चार भएजस्तो लाग्यो । एकाएक आँखा रसाए । पश्चिमतिर १२० मिटरजति पर डाँडामा बसेको त्यो हिउँचितुवालाई हामीले धीत मरुन्जेल हेर्‍र्यौं । क्यामेरा वा दुर्बिनबाट एकै छिन आँखा हटाउँदा त्यो जन्तु क्षणमै विलुप भइसक्थ्यो । फेरि भेट्टाउन आँखालाई उस्तै कसरत पर्थ्यो । हिउँचितुवाले ‘पर्वतको प्रेत’ उपनाम उसै पाएको होइन रहेछ ।
आँखैअघि एउटा वयस्क पोथी हिउँचितुवा शानसँग बसेको थियो । माथितिर भाले कराउँदै गरेको सुनिन्थ्यो । बीचबीचमा पोथीले पनि आवाज दिन्थी । तर, उसको आवाज निकै दबिएको थियो । सायद भालेलाई समागमका लागि तयार भएको संकेत गर्दै थिई । बिस्तारै माथितिर उक्लिरहेको त्यो हिउँचितुवा ४५ मिनेट जति पछि डाँडा पछाडि हरायो ।
होटल पुगेर केही साथीलाई आफैंले खिचेको एउटा तस्बिर पठाएँ । ‘वाह, कस्तो भाग्यमानी तिमी’, सबैको साझा प्रतिक्रिया थियो । मैले पनि सबैलाई साझा जवाफ पठाएँ, ‘यसमा भाग्यको कुनै भूमिका छैन । सही समय र अनुभवी नागरिक वैज्ञानिकको मिहिनेतको प्रतिफल हो यो । आठ वर्षसम्म पटकपटक अभागी भएको मान्छे एकाएक कसरी भाग्यमानी हुन्छ ?’
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ १२:४१